Sei Mwari akazorora nezuva rechinomwe? Discover Online ▷ ➡️
Sei Mwari akazorora nezuva rechinomwe? Kana tichitaura nezvezuva rechinomwe rekusika, tinozviita nekutaura izvozvo Mwari akazorora apedza basa rake. Nenzira iyoyo akazviti chitsvene. Nekudaro, chirevo ichi chinotakura zvimwe Zvinorehwa nehunhu hwaMwari humwari husina chokwadi, iyo inotitungamira kuti titsanangure zvisirizvo meseji yezuva rechinomwe.
1 Nei Mwari akazorora nezuva rechinomwe: Zvinoreva
2 Mwari anoneta here?
3 Kugumisa kwekupedzisira
Nei Mwari akazorora nezuva rechinomwe: Zvinoreva
Chikonzero nei Mwari akazorora nezuva rechinomwe
Mukutaura nezve zororo raMwari pazuva rechinomwe, tinoita kudaro nekunzwisisa kuti Mwari vaida kuzorora kubva pabasa rinonetesa rekugadzira matenga nenyika. Nekudaro, iyo chaiyo chikonzero nei akazorora kwaive kufunga nezvebasa rake, kuriropafadza nekurichenesa. Naizvozvo, zororo raMwari rinoshanda semuenzaniso kuti isuwo ngatizororei uye tifarire simba redu.
Genesisi 2: 3
Mwari anoneta here?
Kuti upindure uyu mubvunzo unofanira kungoverenga Bhaibheri:
Hauna kuziva here, hauna kunzwa here kuti Mwari wekusingaperi ndiJehovha, akasika mativi enyika? Haaneti, kana kuneta nekuneta, uye kunzwisisa kwake hakugone kusvika.
Isaya 40: 28
Sezvauri kuona, Mwari HAVANETE. Musiki wedu isimba risingaperi re simba. Kuzorora kunorevawo kumisa basa. Patinoverenga Genesi 2: 2, hazvireve kuti Mwari akazorora nekuneta, asi kuti akamira kushanda musi iwoyo.
Naizvozvo matenga nenyika zvikapera saizvozvo, nehondo yazvo yose. Mwari akapedza nezuva rechinomwe basa raakaita; ndokuzorora nezuva rechinomwe pabasa rake rose raakange aita.
Nezuva rechinomwe, Mwari aive apedza zvese zvaakange aronga kusika. Pakanga pasina chakasara kugadzira. Naizvozvo, Mwari akamira kusika akazorora.
Izvi hazvireve kuti Mwari haasisina basa mukati nyika. Mwari akazorora hake kubva mukusika nyika. Ramba uchishanda kusvika nhasi. Mwari havazorore kana kutora zororo kuti vachengetedze nyika. Anogara aripo, achishingairira kutora chikamu muhupenyu hwedu. Iko hakuna nguva iyo Mwari asipo kuti atibatsire.
Jesu akavapindura akati: Baba vangu vanoshanda kusvikira ikozvino, neni ndinoshanda.
Mwari akazorora nezuva rechinomwe semuenzaniso kwatiri. Mwari haaneti, asi isu tinoneta. Tinoda kutora nguva yekuzorora. Genesisi 2: 3 inoti Mwari akaropafadza nekutsvenesa zuva rechinomwe. Zuva rechinomwe rakasarudzwa sezuva rekuzorora uye rekuzvipira kuna Mwari.
Kuzorora kunokosha. Izvo hazvina kukosha chete kumutsidzira edu masimba, asi zvakare kukudziridza hukama naMwari nekukoshesa zvisikwa zvake. El zororo rinofanira kunge rakajairwa; Mwari vakagadza zuva rimwe pavhiki kuti isu tiite tsika. Naizvozvo, Akachenesa zuva rechinomwe kuti ave nechokwadi chekuti tinogara tine zororo ratinoda.
Rangarira zuva reSabata kuti urichengete rive dzvene.
Ubate mazuva matanhatu, uite basa rako rose;
asi zuva rechinomwe isabata raJehovha Mwari wako; usatombobata basa pariri, iwe, kana mwanakomana wako, kana mwanasikana wako, kana muranda wako, kana murandakadzi wako, kana chipfuwo chako, kana mutorwa uri mukati memasuwo ako.
Ekisodho 20: 8-10
Izvi ndizvo zvazviri! Tinovimba chinyorwa ichi chinokubatsira iwe kuti unzwisise zvinoreva zvechokwadi zve sei Mwari akazorora nezuva rechinomwe. Kana iwe uchifarira kuziva iyo chikonzero nei maKristu vasingazorore Mugovera kuburikidza nezvikamu zvebhaibheri, ramba uchivhura Ziva.online.